Pinworms (ကပ်ပါးတုတ်ကောင်ကူးစက်ခြင်း ) - Hello Sayarwon
နေထိုင်မှု ပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများ
Pinworms (ကပ်ပါးတုတ်ကောင် ကူးစက်ခြင်း ) ကဘာလဲ။
တုတ်ကောင်ကူးစက်တယ် ဆိုတာ လူတွေရဲ့ အူထဲမှာ ကပ်ပါးကောင်ကူးစက်တဲ့ အမျိုးအစားတွေထဲ က အဖြစ်များတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်ယူဆ ကြပါတယ်။ တုတ်ကောင်ဆိုတာ အလွန်သေးငယ်ပြီး ချည်မျှင်လို ပါးလွှာတဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်ရှိပြီး လက်မဝက်လောက်တောင် မရှည်ပါဘူး။ တုတ်ကောင်ကူးစက်ခံရတာကို enterobiasis ဒါမှမဟုတ် oxyuriasis လို့ခေါ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အတွေ့ရအများဆုံး ကူးစက်ရောဂါလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တုတ်ကောင်ကူးစက်မှုဟာ ပျံ့နှံ့လွယ်ပါတယ်။ အသက် ၅ နှစ်နဲ့ ၁၀ နှစ်ကြား အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ပုံမှန် ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ ကလေးတွေများ အဖြစ်များပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ကူးစက်တာမျိုး ရှိနိုင်ပေမယ့် ကုသတဲ့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဆေးသောက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ ဆင့်ပွားရောဂါတွေနဲ့ နာတာရှည် ဝေဒနာတွေ ခံစားရတာမျိုးကတော့ ရှားပါးပါတယ်။
Pinworms (ကပ်ပါးတုတ်ကောင် ကူးစက်ခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
တုတ်ကောင်ကူးစက်တာက ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ရောဂါ ဖြစ်လာစေမယ့် အမူအကျင့်တွေကို ဂရုစိုက်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ထပ်သိချင်တာရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Pinworms (ကပ်ပါးတုတ်ကောင် ကူးစက်ခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တုတ်ကောင်တွေ ရှိနေပြီလို့ သိနိုင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
စအို ဒါမှမဟုတ် ယောနိ အနားတစ်ဝိုက် ယားမယ်
အိပ်မပျော်ဘူး၊ စိတ်ထဲနေမထိထိုင်မသာ နဲ့ ဂဏာမငြိမ် ဖြစ်နေမယ်
ဗိုက်အောင့်လိုက် မအောင့်လိုက်၊ ပျို့ချင်အန်ချင်စိတ် ဖြစ်လိုက်နဲ့ ရှိနေမယ်
တစ်ခါတစ်လေမှာ တုတ်ကောင်တွေရှိနေတဲ့ လက္ခဏာတွေ မတွေ့ရတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပါဝင်တဲ့ လက္ခဏာတွေထဲ ကျန်ခဲ့တာမျိုးလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေ တွေ့နေရတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်ပါ။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်ပါ။ ခန္ဓါကိုယ် အလုပ်လုပ် မှုပုံစံဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ သင့်အတွက် ဘာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် ဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာက အသင့်လျော်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Pinworms (ကပ်ပါးတုတ်ကောင် ကူးစက်ခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
တုတ်ကောင်တွေက အရမ်းကူးစက်လွယ်ပါတယ်။ တုတ်ကောင်ဥတွေ မျိုချမိတယ် ဒါမှမဟုတ် ရှုသွင်းမိတယ် ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ လူတွေ၊ အရာဝတ္ထုတွေ နဲ့ ထိတွေ့မိတယ်ဆိုရင် ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်တဲ့ စက်ဝန်းဟာ တုတ်ကောင်ဥတွေ မျိုချမိတဲ့ အဆင့်ကနေ စပါတယ်။
တုတ်ကောင်ဥတွေက ခန္ဓါကိုယ်ထဲရောက်လာတာနဲ့ အူထဲမှာ တွယ်ကပ်နေပြီး တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ တုတ်ကောင် အမတွေဟာ အူမကြီးထဲဝင်ရောက်ပြီး မစင်နဲ့ အတူခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပရောက်သွား ပါတယ်။ တုတ်ကောင် အမတွေဟာ စအိုအနီးက အရေပြားခေါင်တွေထဲမှာ ဥတွေ ဥထားခဲ့တဲ့ အတွက် တစ်ခါတစ်လေ စအိုအနားမှာ ယားတာ၊ နေမထိထိုင်မသာတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တုတ်ကောင်ဥတွေရှိနေတဲ့ နေရာကို ကုတ်မိတဲ့ အခါ ဥတွေက လက်ချောင်းတွေနဲ့ အတူပါလာပါတယ်။ ဥတွေဟာ လက်ချောင်းတွေပေါ်မှာ နာရီပေါင်းများစွာ အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်။ လက်မှာ ဥတွေရှိနေတဲ့အခါ အိပ်ရာ၊ အဝတ်၊ အိမ်သာခုံ၊ အရုပ် ဒါမှမဟုတ် တခြား အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကို ကိုင်မိတဲ့ အခါ အဲ့ဒီ ပစ္စည်းတွေ ဆီကို ဥတွေရောက်သွားပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာ ဆိုရင် တုတ်ကောင်ဥတွေဟာ ၃ ပတ်အထိ အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေဟာ ပစ္စည်းတွေကို ပါးစပ်ထဲ အလွယ်တကူထည့်လေ့ရှိတဲ့ အတွက် တုတ်ကောင်ဥတွေက ကလေးတွေဆီ ကူးစက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာနဲ့ ဖျော်ရည်တွေဆီကိုလည်း လက်ကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးတွေဆိုရင် တုတ်ကောင်ပိုးရှိနေတဲ့ အိပ်ရာခင်း၊ ပုဝါ၊ အဝတ်တွေကို ခါတဲ့ အခါ လေကနေတစ်ဆင့် အသက်ရှုသွင်းတဲ့ အခါ ကူးစက်နိုင်ပါသေးတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Pinworms (ကပ်ပါးတုတ်ကောင် ကူးစက်ခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဘာတွေက တုတ်ကောင်ကူးစက်ဖို့ အခြေအနေပိုများသလဲ။
နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်းတွေ တက်နေတဲ့ ကလေးတွေ
မိသားစုထဲ တုတ်ကောင်ပိုးကူးစက်ခံစားရတဲ့ ကလေး လူကြီးတွေ ရှိနေရင်
လူအစုအဝေး၊ လူအများစုနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့ သူတွေ
အစာမစားခင် လက် သေချာ မဆေးတဲ့ သူတွေ
Pinworms (ကပ်ပါးတုတ်ကောင် ကူးစက်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကူးစက်ခံနေရပြီလို့ သံသယ ရှိရင် ကိုယ်ခန္ဓါကိုယ်စစ်ဆေးကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့ တခြားလိုအပ်တဲ့ ဆေးစစ်ချက်တွေ လည်း လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ တိပ်ကပ်ပြီး စစ်ဆေးမှုဟာ အမှန်ကန်ဆုံး တုတ်ကောင်စစ်ဆေးချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အကြည်ရောင် တိပ် အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး စအိုအနားတစ်ဝိုက်မှာ ကပ်ထားလို့ရပါတယ်။ ကူးစက်ခံထားရသူအနေနဲ့ စအိုမှာ ဒီတိပ်ကို ကပ်ပြီး အိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဥတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် မနက်ကျရင် ဥတွေက တိတ်မှာ ကပ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိပ်ကို ဆရာဝန်ဆီယူသွားပြီး ဥတွေ ပါမပါကို မိုက်ခရိုစကုပ်အောင်မှာ ကြည့်ရပါမယ်။ ပုံမှန်လုပ်နေကျ ဖြစ်တဲ့ ရေချိုးတာ၊ အိမ်သာတက်တာတွေကလည်း အရေပြားပေါ်ကနေ ဥတွေကို ကွာကျသွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အိပ်ရာက နိုးနိုးချင်း စမ်းသပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ CDC ရဲ့ အကြံပေးချက်အရ တိပ်ကပ်တာကို အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ်၊ ၃ ရက်ဆက်တိုက်လုပ်သင့်ပြီး တုတ်ကောင်ဥတွေတွေ့နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
Pinworms (ကပ်ပါးတုတ်ကောင် ကူးစက်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
တုတ်ကောင်ကူးစက်မှုကို ကုသဖို့ အတွက ်ဆရာဝန်က အိမ်တွင်းဆေး pyrantel pamoate (Reese’s Pinworms Medication, Pin-X) ဒါမှမဟုတ် ဆေးစာကို မိသားစုဝင်တွေ အတွက် ရေးပေးပါလိမ့်မယ်။
တုတ်ကောင်တွှေအတွှက် ပေးရတဲ့ ဆေးစာတွေမှာ အောက်ပါဆေးအမျိုးအစားတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ကုသဆဲကာလမှာ ဆိုရင် အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းတွေမှာ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဆိုရင် တုတ်ကောင်တွေ လုံး၀ ကင်းစင်သွားအောင် ဆေး ၂ ကြိမ် အထိ သောက်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တုတ်ကောင်ကူးစက်မှုကနေ ကာကွယ်နိုင်မယ့် နေထိုင်မှု ပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက ဘာတွေလဲ။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေက ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တုတ်ကောင်တွေဟာ ညပိုင်းမှာ ဥဥချတဲ့ အတွက် မနက်ပိုင်း စအိုအနားတစ်ဝိုက်ကို ဆေးကြောပေးမယ်ဆိုရင် တုတ်ကောင်ဥတွေကို လျော့ကျသွားစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရေချိုးခြင်းကလည်း မသန့်စင်တာတွေကို ဆေးကြောလိုက်သလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အတွင်းခံ နဲ့ အိပ်ရာခင်းကို နေ့တိုင်းလဲလှယ်ပေးခြင်း
ဥတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အကူအညီဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ရာခင်း၊ ညဝတ်အကီၤျ၊ အတွင်းခံ၊ ရေလဲ နဲ့ ပုဝါတွေကို ရေပူနဲ့ လျှော်တာကလည်း တုတ်ကောင်တွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်။ အပူချိန်မြင့်မြင့်ထားရပါမယ်။
စအိုနားတစ်ဝိုက်ကို မကုတ်မိပါစေနဲ့။ တုတ်ကောင်ဥတွေ မခိုအောင်းနိုင်စေဖို့ ကလေးရဲ့ လက်သည်းတွေကို ညှပ်ပေးပါ။ လက်သည်းမကိုက်ပါစေနဲ့။
တုတ်ကောင်ကူးစက်မခံရစေဖို့ အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်း၊ ဒိုင်ယာပါ လဲပြီးတိုင်း၊ အစားမစားခင်တိုင်း လက်ကို သေချာဆေးပါ။
Pinworms. http://www.healthline.com/health/pinworms#Overview1 . Accessed January 10, 2017.
Pinworms. https://en.wikipedia.org/wiki/Pinworm_infection . Accessed January 10, 2017.
Pinworms. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pinworm/basics/definition/con-20027072 . Accessed January 10, 2017.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ကူးစက်ခံရသော ကပ်ပါးရောဂါ
Liver Fluke Infection (အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သော ရောဂါ)
Mycoplasma Pneumonia (Mycoplasma ကပ်ပါးပိုး ကြောင့်ဖြစ်သော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ )